“ကျောက်ပန်းတောင်း ..အသတ်ခံရတဲ့ မြွေမကြီးမှာ ကလေးမွေးပြီးတာ ၃ ရက်ပဲရှိသေး သတ်တဲ့သူကို ဝင်ပူးပြီး တွင်းထဲမှာ သူ့ကလေးတွေ ရှိတယ်….” – Askstyle
ကျောက် ပန်းတောင်း အသတ်ခံရတဲ့ မြွေမကြီးမှာ ကလေးမွေးပြီးတာ ၃ ရက်ပဲရှိသေး …သူ့ကိုသတ်သူအား မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူးပြီး သူအ​ရေခွံကိုသူ့တွင်းဝမှာထား​ပေးရန်​ပြော
ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့​အောင်​မင်္ဂရပ်​ကွက်​ ကြွယ်​ဝ​တောင်​ဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရက်​​နေ့ဖြစ်​ရပ်​​လေးပါ….
ယခုပုံပါ လူငယ်​မှ ​မွေးကြီးအား သတ်​၍ အ​ရေခွံဆုပ်​ အပြီးအသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှ ဝင်​ပူး​နေသည်​မှာ ၂ရက်​ ရှိပါပြီ။ အသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှာ သူက​လေးများ ၎င်း တွင်းထဲတွင်​ရှိ​ကြောင်း က​လေး​မွေးပြီးတာ ၃ရက်​သာ ရှိ​သေး​ကြောင်း ဝင်​ပူးပြီး​ပြောသံကြားရ…။
သူအ​ရေခွံကို သူ့တွင်းဝတွင်​ ထား​ပေးရန်​နှင့်​နို့​သောက်​ချင်​​ကြောင်း မကြာခန​ပြော၏။
လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါ…လို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​
ဤအနီးနားတွင်ကြွယ်​ဝ​တောင်​၏ရာဇဝင်​ကိုကြားသိ​နေရ​သော်​လည်း မယုံတာလည်းမဟုတ်​ ယုံတာလည်းမဟုတ်​ယခုမူလက်​​တွေ့မြင်​လိုက်​ရ​လေပီ မယုံလို့မရတာကို
လက်​​တွေ့ပြ​လေပီ ဝင်​ပူးတဲ့ vedio ​file ​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတ်​​နော်
ကြောကျ ပနျးတောငျး အသတျခံရတဲ့ မွှမေကွီးမှာ ကလေးမှေးပွီးတာ ၃ ရကျပဲရှိသေး …သူ့ကိုသတျသူအား မွှကေိုယျတိုငျဝငျပူးပွီး သူအရခှေံကိုသူ့တှငျးဝမှာထားပေးရနျပွော …
ကြောကျပနျးတောငျးမွို့အောငျမင်ျဂရပျကှကျ ကွှယျဝတောငျဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရကျနဖွေ့ဈရပျလေးပါ….
ယခုပုံပါ လူငယျမှ မှေးကွီးအား သတျ၍ အရခှေံဆုပျ အပွီးအသတျခံရသော မှမေကွီးမှ ဝငျပူးနသေညျမှာ ၂ရကျ ရှိပါပွီ။ အသတျခံရသော မှမေကွီးမှာ သူကလေးမြား ၎င်းငျး တှငျးထဲတှငျရှိကွောငျး ကလေးမှေးပွီးတာ ၃ရကျသာ ရှိသေးကွောငျး ဝငျပူးပွီးပွောသံကွားရ…။
သူအရခှေံကို သူ့တှငျးဝတှငျ ထားပေးရနျနှငျ့နို့သောကျခငျြကွောငျး မကွာခနပွော၏။
လကျတှရေောနှာခေါငျးတှပေါးစပျတှနေဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတျ၍ ဝငျမလိုတှဖွေဈနလေို့အနီးနားရှိသူတှမှေတောငျးပနျပီးလိုတာပွောပါ…လို့ပွောတဲ့အခနှားနို့ပေးပါပဲတောငျးနပေီးငါကလေးတှရှေိတယျလို့လဲပွောပါတယျ